ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem)
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem)
1 ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem) on 6th July 2011, 6:58 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 46
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-11-08
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 93
ကျွန်တော် gmail ကကျွန်တော်မသုံးဘဲနဲ့အမြဲ sign in ဖြစ်နေလို့ဗျာ
ဘာဖြစ်နေမှန်းတော့မသိဘူး hack ခံထားတာတော့မဖြစ်လောက်ဘူး ကြာတော့ကြာနေပြီ
၂ လလောက်တော့ရှိပြီ(အခုထိဘဲ) ကျွန်တော်သုံးတဲ့မေးတဲ့အကုန်လုံးဖြစ်နေတာ ဆိုင်မှာလည်းမသုံးဘူး
အစကတော့ သူများခိုးတယ်ထင်ပြီ password တွေ security question တွေလိုက်ချိန်းတာ မောနေတာဘဲ ကြာလာတော့လည်းမချိန်းဖြစ်တော့ဘူး
ထူးဆန်းတာကဘယ်လိုချိန်းချိန်း sign in ဖြစ်နေတာဘဲ တခြားအကောင့်ကနေကြည့်ရင် ideal တောင့်မဖြစ်ဘူး မမြဲစိမ်းနေတယ် သူများခိုးတယ်ထင်ပြီ သူငယ်ချင်းတွေကော ကျွန်တော်ကော ၀ိုင်းကောတာ ဒီကောင်ကဘာမှပြန်မပြောဘူး (ကိုယ်ဘဲမောတယ် မေးကိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး အထဲကစာတွေ ဘာမှခြေရာလက်ရာမပျက်ဘူး ဟီး)
အခုမှ forum ပေါ်မေးဖြစ်တာကတော့ တချိုသူငယ်ချင်းတွေက ဓါးကြိမ်းကြိမ်းနေလို့ သူတို့ပြောတာတောင်ဘာမှပြန်မပြောဘူးဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တကယ်ဝင်သုံးတဲ့အခါကျရင်ရှင်းလိုက်ရတာမောနေတာဘဲ (sky net) ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်အခုတလောမသုံးဖြစ်တာလည်းပါပါတယ် ကွန်နက်ရှင်ကြောင်းကို ဆက်မပြောချင်တော့ပါဘူး
2 Re: ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem) on 6th July 2011, 9:35 pm
ဒါဆို last login IP တွေကိုကြည့်ကြည့်ပါလား....
3 Re: ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem) on 7th July 2011, 5:18 am
Gmail မှာ Stay sign in ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်ထားမိလို ့များလား???????
4 Re: ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem) on 7th July 2011, 4:42 pm
stay sign in ကိုတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲဒါတော့သေချာတယ်
setting တွေမှားချိန်းမိရင်လည်း mail တစ်ခုဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
last login ip ကြည့်တာကိုတော့မသိသေးဘူး
5 Re: ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem) on 7th July 2011, 8:12 pm
daysatjune wrote: အစ်ကိုတို့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ
gmail ကို sign in ၀င်လိုက် ပြီးရင် စာမျက်နှာ အောက်ဆုံးမှာ detail ဆိုတာလေး ရှိတယ် အဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
6 Re: ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem) on 14th July 2011, 3:42 pm
ccleaner ကို သုံးကြည့် ပါလား
ုုုုု[You must be registered and logged in to see this link.]
7 Re: ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem) on 14th July 2011, 4:25 pm
ကျနော်တို့ ရုံးက ၀န်ထမ်းတစ်ရောက်ရဲ့စက်လည်း အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်
အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးကို ကျနေ်ာလုပ်ပေးခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး
8 Re: ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem) on 14th July 2011, 10:58 pm
အစပိုင်းကဆိုဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်အမြဲ sign in ဖြစ်နေတယ်
9 Re: ငါ gmail ကို hack တာလားကွ (problem)